Ciidamada Dowladda oo gacanta ku dhigay Rag Waraaqado Digniin ah ku daadin Jiray Muqdisho+Sawiro – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa maanta la soo bandhigay rag magaalada Muqdisho ku daadin jiray waraaqo lagu cabsi gelin jiray dadka ku nool Caasimada, waxayna Wasaaradda Amniga Xukuumada Federaalka Soomaaliya ragaasi ku soo bandhigtay Xarunta Tababarka Booliska Generaal Kaahiye ragaasi iyo qalabkii ay wax ku dabaaci jireen.
Ragaan la soo bandhigay oo ahaa saddex dhalinyaro ayaa waxaa Dowladu sheegtay in ay falkaani in muddo ah ay ka wadeyn Magaalada Muqdisho waxayna Wasaarada Amniga Xukuumada Fedraalka iyo saraakiisha Booliska ay soo bandhigeyn warqado digniin ah oo lagu cabsi gelinaayo shacabka bsida ay sheegeyn oo ragan lala soo qabtey.
Wasaaradda Amniga ayaa soo bandhigtay ragaasi oo ahaa sadax ruux oo dhalinyaro ayaa sawirro laga soo qaaday waxaa ka dhex muuqday Maxamed Nuur oo shacabka Muqdisho ay u garanayaan (Idaacadda Wareegta).
Dhanka kale Idaacadda Wareegta ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho waxay ku yaqaanaan inuu iska dhigo codadka siyaasiyiinta iyo in Gawaarida BL-ka ah oo uu ka iibsado warqado uu ugu qorayo Telefoonadooda, si lacagta dadweynaha gaariga raacaya ay ugu tuuraan.
The post Ciidamada Dowladda oo gacanta ku dhigay Rag Waraaqado Digniin ah ku daadin Jiray Muqdisho+Sawiro appeared first on Ilwareed Online.